Khuphela iphepha lodonga elitsha le-Samsung Galaxy S10 elandelayo | I-Androidsis
NgoFebruwari 20, inkampani izokwazisa ngokusesikweni i-Samsung Galaxy S10 entsha kunye nokwahluka kwayo okwahlukileyo, itheminali apho i-chaebol I-Samsung yaseKorea ibhiyozela isikhumbuzo seminyaka elishumi kwaye apho sazi ngokuchanekileyo zonke iinkcukacha kunye noyilo, ngenxa yoko bambalwa abothusayo abaya kuthathwa ngabazimeleyo abanethuba lokuzimasa.
Njengesiqhelo, kwiintsuku phambi kokunikezelwa ngokusesikweni kwesiphelo esitsha, sinako ukonwabele enye yeemifanekiso zamaphephadonga eza kuvela esandleni sesi siginali. Kwakhona ibe yi-Ice Universe ethe yavuza iakhawunti yakhe ye-Twitter ingxowa-mali entsha eza kuqala kwiGPS S10.
Ukuba ufuna ukukhuphela umfanekiso woqobo walephepha lodonga, ungayenza ngokuthe ngqo ngokunqakraza kumfanekiso omncinci oza kuwufumana ekupheleni kweli nqaku. Xa ucofa kuyo, kuya kufuneka ukhethe ukhetho Ukhuphele ubungakanani boqobo ukuze ukwazi ukukhuphela umfanekiso kwisisombululo esikhoyo, 2048 × 996, isisombululo mhlawumbi ayizukugqibela, kodwa yeyona nto ikufutshane esinokuba nayo namhlanje ukuba sele sifuna ukonwabela enye yeemifanekiso eziza kuvela kwisandla seGPS S10.
Ngaphandle kokuba iSamsung isigcinele isimanga ngomhla wentetho, i-S10 iya kufumaneka kwiinguqulelo ezintathu, Iinguqulelo ezintathu ezinobukhulu obahlukeneyo besikrini kunye neenkcazo ezahlukeneyo. I-Galaxy S10e iya kuba sisixhobo sokungena kolu luhlu, isixhobo esizakuzama ukuthoba iindleko, siya kuba nesenzwa somnwe ecaleni, endaweni phantsi kwescreen ngokungathi i-S10 kunye ne-S10 Plus ziya kuthanda. Ukongeza, ngasemva iya kuba neekhamera ezimbini kuphela ze-3 kunye ne-4 eziya kuthi zibe ne-S10 kunye ne-S10 Plus ngokulandelelana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Khuphela iphepha lodonga elitsha le-Samsung Galaxy S10 elandelayo